सेरोफेरो : बन्द, अब नहोस् !
यहि कक्षा पढ्न जाने क्रममा पनि कहिलेकाही भइरहने बन्द, हड्ताल र चक्काजामले उनलाई दिक्क पारेको रहेछ । हुनत बेलाबेलामा हाम्रो देशमा हुने यस्तै बन्द, हड्ताल र चक्काजामबाट उनीमात्र हैन धेरै भाईबैनी हैरान रहेछन् ।
‘बिचबाटोमा तीन घण्टा विद्यालय–बसमै पनि बसेका छौं’ कलंकी, काठमाडौंकी सृष्टी खनालले बन्द सम्झन थालिन्, ‘बल्खु बन्द रहेछ, क्या दिक्क लागेथ्यो ।’ सेन्टमेरीज उच्च मावी जाउलाखेल पढ्दै गरेकी उनलाई बन्द मन पर्दो रहेनछ ।
‘जुलुस, लडाई हुन्छ, टाएर बाल्छन्, विद्यालय बन्द हुन्छ, बाटोमा हिड्न सकिँदैन’ सृष्टीको यो उत्तरसँग सहमत शंकर राईले भने,‘यस्तो भएपछि हामीलाई डर लागिहाल्छ नी ।’
हो , धेरै भाइबैनीलाई डर र दिक्क लाग्दो रहेछ बन्दमा । धोवीघाट काठमाडौं बस्ने साना भाई शंकरका कुरामा महोत्तरीका रोशन चौधरी पनि सहमत थिए ।
गएका वर्ष विभिन्न बाहानामा पटक पटक तराई बन्द भयो । महोत्तरीमै पनि धेरै पटक हड्ताल, बन्द भएको पनि सुनेका र भोगेका छन् उनले । नयाँ बानेश्वको लालीगुराँश बाटीका विद्यालय पढ्दै गरेका चौधरीले काठमाडौंमै पनि धेरै बन्द भोगिसके ।
बन्द, हड्तालका बखत विद्यालयपनि खुल्दैनन् । विद्यालय बन्द भयो भने राम्ररी पढ्न पनि पाईदैन् । ‘अनि कसरी ठूलो मान्छे बन्ने ?’ चौधरीले उठाएको यो प्रश्नको उत्तर कसले दिन्छ उनलाई थाहै छैन ।
हुनत बेलाबेला हुने आन्दोलनले भाइबैनीलाई केहि रमाइलो भने बनाएको रहेछ । हर दिन विद्यालयका किताब रट्नु पर्ने उनीहरूलाई बन्दमा केही आराम मिल्दो रहेछ । सडकमा निस्केर खेल खेल्न पाइने । लोडसेडिङ छैन भने, घरमा बसेर टिभी हेर्न पाईने । यदाकदा जुलुस हेर्न पाईने, यस्तै ।
‘छोइखेल, लुकामारी, फुटबल, क्रिकेट, चुङ्गी खेल्ने हो’ बन्दका दैनिकी सुनाउँदै देवेन्द्र महर्जनले भने, ‘तर, खेलेरमात्र के गर्नु, पढ्न पाईएन भने के काम ?’ बन्द एकदिनका लागि रमाइलो भएपनि भविश्यका लागि नराम्रो हुने कुरामा युनिक मोडल एकेडेमी कुमारीपाटी ललितपुरका महर्जन सहमत देखिन्थे ।
कक्षा सातमा टेकेका महर्जनलाई बन्दमा दिक्क बनाउने अर्को कुरा पनि रहेछ, ‘सडकमा पोलिने टायरको नमिठो गन्ध’ । बन्द गर्नेले सडकमा टाएर बालेको युनिक इंग्लिस स्कुल हरिहर भवन, पुल्चोककी सिवानी थापालाई पनि मन पर्दो रहेनछ् । ‘आँखा पोल्छ, बाटोमा हिड्नै सकिँदैन’ तीन कक्षा उक्लनै लागेकी थापाले दुखेसो पोखिन्, ‘त्यस्तो गन्हाउने कुरा नपोले हुने नी ।’
यो कुराले उनका साथी राजकुमार पौडेल हाँस्न थाले । ‘बाटोमा टायर नपोल्यो भने त बन्दै हुन्न रे के’ लामटार ललितपुरका दश वर्षे पौडेलले कलिला दाँत देखाउँदै भने,‘ जुलुस ग¥यो, टायर बाल्यो अनि पो बल्ल बन्द हुन्छ ।’
विद्यापुञ्ज इंग्लिस सेकेण्डरी स्कुलका पौडेलले पनि जानी सकेछन् यी कुरा । भोलि ठूलो भएपछि यस्तै गरि बन्द गर्छौं त ? ‘नाई, बन्द गर्दा सबैलाई दुःख हुन्छ नी’ टाठा पौंडेलले छोटा उत्तर फर्काउँदै हँसाए, ‘बन्द नहोस् भनेर भन्चु म ।’
यसरी सधै मिठो हाँस्न कमै बैनिभाइले पाएका रहेछन् । हड्तालका बिच धेरै बैनीभाइको बिचल्लि पनि भएको रहेछ । कति त सडकमा ढुङ्गा हानाहानका बिच पनि हिडेका रहेछन् । धेरै पटक विद्यालय पुगेर पनि बन्दका कारण फर्कनु परेको गुनासो गर्दैथिए केहीले । लिटीलएन्जेल्स् स्कुल हात्तीवनको ६ कक्षामा पढ्दै गरेका समन श्रेष्ठपनि बेलाबेला भइरहेन बन्दले दुखी देखिन्थे । कोटेश्वरबस्ने उनी बन्दहुँदा साथीभाईसँग भेटघाट हुन नपाईने र घरमा बसिरहन अल्छि लाग्ने कुरा उप्काउँदै थिए । बन्द, हड्तालमा ‘केही नराम्रो घटना घट्छ की’ भन्दै मनमा डर लाग्ने कुरा पनि गरे केहीले ।
नयाँ वर्ष लागेको छ । बन्द गर्नेलाई के भन्छौं त ?
‘अब देखि कहिल्यै बन्द नहोस भन्छु’ त्रिपद् विद्याश्रम उच्च मावी, पुल्चोक कि सानी बैनी रशना महर्जनले निधार खुम्च्याईन, ‘के गर्नु हामी सानाका कुरा कसैले सुन्दैनन् ।’
(-भवसागर घिमिरे, नागरिक दैनिकको दोस्रो अ‌‌‍कमा प्रकाशित,२००९ जुलाइ)